Sida loo doorto suudhka arooska buluuga ah | Niman qurux badan
Maalinta aroosku waa mid ka mid ah maalmaha ugu muhiimsan ee dad badan. Qaar badan ayaa ah kuwa doorbidaya inay raacaan xeerka labiska dhaqameed halkii ay halis gelin lahaayeen labbis casri ah oo casri ah oo si weyn uga duwan kuwa caadiga ah iyo kuwa dhaqameed.
Markaad dooranayso dharka arooska, waxa ugu horreeya ee la tixgelinayo waa midabka aan jecelnahay. Maqaalkani, waxaanu diiradda saari doonaa sida loo doorto dharka buluuga ah ee buluuga ah, mid ka mid ah midabada caadiga ah iyo in, sidoo kale, iyadoo ku xiran nooca suudhka, waxaan isticmaali karnaa wax ka badan hal mar.
1 Waxa ugu horreeya: nooca suudhka
1.1 gooyn Classic
1.2 Goynta joogtada ah
1.3 taam caato ah
1.5 Dharka subaxda
2 Dharka buluuga ah ee arooska
Waxa ugu horreeya: nooca suudhka
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan caddaynno marka la dooranayo nooc ama mid kale oo ka mid ah suudhka arooska waa nooca suudhka ugu fiican isaga. Marka lagu daro tuxedo-dhaqameedka iyo suudhka subaxda, suuqa waxaan ka heli karnaa saddex nooc oo suudh ah:
Sawirka: El Corte Inglés
Goynta caadiga ah, sida magaceedu si fiican u qeexayo, waxay ina tusinaysaa suudhka caadiga ah, oo leh surwaal toosan oo ballaaran, dhexda ballaaran iyo garabka caadiga ah.
Goynta joogtada ah
Goynta caadiga ah waxay ina tusinaysaa surwaal qaabaysan, koonto dhexda ku rakiban, godadka cudud ee ka adag goynta caadiga ah iyo garab u dhow jirka.
taam caato ah
Goynta caatada ah waxaa loogu talagalay kuwa ku dhaqma ciyaaraha badan oo aan haysanin garaam oo baruur ah, maadaama ay ku habboon yihiin jirka sida galoofyada.
Nooca noocaan ah waxaa ka mid ah surwaal caato ah, koonto cidhiidhi ah (xitaa in ka badan qaabka caadiga ah), cudud iyo gacmo dhuuban, iyo garab ku habboon.
Tuxedo guud ahaan waxay ka kooban tahay jaakad madow (inkasta oo sidoo kale laga heli karo buluug saqda dhexe ah), waxaa ku jira jaakad ama cummerbund iyo surwaal jeexan oo qadiimi ah oo dhinacyada ka xiran yihiin. Qalabkan waxaa lagu isticmaalaa shaadh cad oo cad oo leh kuleej Ingiriisi ah iyo katiinado labanlaab ah oo leh katiinado.
Haddii aadan rabin inaad ka baxdo dhaqanka, dharka ugu caansan ee noocan oo kale ah ayaa ah inaad xirto jaakad subax ah. Qaybta sare, sida haddii aan isticmaalnay tuxedo, waa jaakad buluug ah oo madow ama saqdhexe ah oo leh goonooyin dambe oo ay la socdaan shaati cad oo Ingiriisi ah iyo katiinado labajibbaaran oo leh katiinado iyo surwaal qurxin leh.
Labada jaakad, surwaalka iyo shaatigu waa inay ahaadaan midabyo adag, marka laga reebo xadhig, kaas oo la socon kara nooc ka mid ah qurxinta dheeraadka ah. Haddii aan sidoo kale rabno inaan noqonno sida ugu macquulsan, waxaan raaci karnaa jaakada subaxda oo leh koofiyad sare.
Inkasta oo dabada aan si weyn loo isticmaalin aroosyada, maadaama ay tahay suudh loogu talagalay dhacdooyinka habeenkii ama meelaha xiran. Dharka noocaan ah ayaa si weyn loogu isticmaalaa munaasabadaha bulshada ee England, sida tartanka faraska Ascot iyo xafladaha rasmiga ah.
Dharka buluuga ah ee arooska
Haddii aadan rabin inaad wax badan u wareegto si aad u hesho suudhka buluuga ah ee ku habboon dhadhankaaga oo dareemaya sidii gacan-gashi, mid ka mid ah xarumaha ugu fiican ee aan gacanta ku hayno waa El Corte Inglés
El Corte Inglés, waxaan ku leenahay kaliya naqshadeeyayaasha kala duwan, laakiin sidoo kale waxaa ku jira adeegga dawaarka si ay u sameeyaan isbedel kasta oo ku habboon jirkeena.
Haddii aadan magaaladaada ku lahayn Corte Inglés, waxaad dooran kartaa dukaan ku takhasusay suudadka (magaalooyinka oo dhan, haba yaraatee, waxaa jira wax ka badan hal).
Ikhtiyaarka kale ee xiisaha leh ee lagu xisaabtamayo waa iibsashada internetka ilaa inta uu website-ku noo diyaariyo cabbirada dhammaan walxaha qaybta ka ah suudhka, sida surwaal, jaakad iyo jaakad.
Dhibaatadu waxay tahay, haddii ay tahay inaan hagaajino, waa inaan u tagnaa harqaanle oo aan bixinno dheeraad ah, dheeraad ah oo aan bixineynin haddii aan si toos ah wax uga iibsanno dukaanka suudhka ama dukaanka harqaanka.
Haddii aad lacag haysato, booqashada dawaarle had iyo jeer waa ikhtiyaarka ugu fiican. Haddii dhaqaalahaaga aan lagu sifeyn inuu yahay mid aad u kacsan, waxaad ka iibsan kartaa mid online dhib la'aan, iyadoo Amazon ay tahay goobta ugu fiican ee sidaas lagu sameeyo.
Inta badan suudadka aan ka heli karno suuqa waxay ka samaysan yihiin 100% dhogorta, isku darka dhogorta iyo polyesterka, polyester iyo cudbi, polyester iyo viscose.
Nashqadeeyaha Emidio Tucci (El Corte Inglés) wuxuu na siinayaa noocyo badan oo kala duwan oo ah suudadka arooska ee madow iyo buluugga ah. Intaa waxaa dheer, waxay isku daraysaa noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan ee aan kor ku soo sheegay, oo na siinaya ikhtiyaarka suxuunta subaxda oo leh nakhshad taam ah oo caadi ah oo ah 2 ama 3 qaybood.
Soo saaraha Suit Allthemen ayaa ku takhasusay samaynta suudadka ragga oo leh astaamo moodo, raaxo iyo xarrago. Waxay yihiin kuwo si xirfadaysan loogu nashqadeeyay suudadka ragga, waxaana lagu qiimeeyaa in ka badan la awoodi karo Amazon.
Ka dib markii ay xidhatay Nazis intii lagu jiray dagaalkii labaad ee aduunka, ka dib dhimashadii aasaasaheeda, shirkadu waxay diiradda saartay hawsheeda soo saarista dharka ragga. Hugo Boss wuxuu na siinayaa noocyo kala duwan oo ku habboon buluugga ah ee gooyooyinka ugu caansan: classic, taam iyo caato.
Haddii aad raadinayso jaakad subaxdii Hugo Boss, arrimuhu aad bay u dhib badan yihiin, maadaama aan loo qoondayn nooca badeecada. Si kastaba ha ahaatee, waxay na siisaa noocyo badan oo tuxedos ah munaasabad kasta.
Mirto waxay na siisaa noocyo kala duwan oo ah 2 iyo 3-suud oo ka samaysan 100% dhogor ah oo leh gooyo caato ah iyo mid caadi ah. Waxa kale oo ay na siisaa tuxedo laba qaybood ka kooban oo leh xidhid badhan satin-lineed, jeexan dhabarka, cirifka sare iyo surwaal aan raxmad lahayn.
Haddii aad raadinayso jaakad subaxdii arooskaaga ama suudh leh qaabab kala duwan, Wicket Jones waxaad ka heli doontaa noocyo kala duwan oo kala duwan, oo ay weheliyaan tiro badan oo qalab ah iyo jaakadaha nooc kasta ah.
In kasta oo ay run tahay in aanay ahayn soo-saare raqiis ah, tayada aan ka heli doonno alaabooyinkan ayaa ka fog kuwa ay xafiiltamaan ee magac yar. Waxaan sidoo kale bixinaa suudadka leh biinstripe ka samaysan 100% dhogorta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Sida loo doorto suudhka arooska ee buluuga ah